Uncategorized | Cherry World Fashion
Thingyan Promotion For Cherry World Fashion
March 28, 2018 graceit_admin Uncategorized No comments
Cherry World တွင် အမြဲအားပေးနေသော Customer များအတွက် (15.3.2018) မှ (11.4.2018) ထိ သင်္ကြန်
အကြို Discount တွေချပေးနေပါပြီ။
– ချိတ် နှင့် ဇာ များကို 10% to 50% Discount
– ပိုးစစ်ချိတ်/ ပိုးဇင်းမယ် နှင့် ပိုးပုဆိုး များကိုလည်း 10% Discount နှင့်
– ကိုးရီးယားဇာ နှင့် ဘရိုကိတ်များကိုလည်း တစ်ကိုက်ဝယ်တစ်ကိုက် လက်ဆောင်ပေးနေပါပြီဖြစ်သည့်အတွက် Cherry World သို့ လာရောက်အားပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါသည်။ ဝယ်ယူအားပေးမှုအတွက်လည်း အထူးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
graceit_adminThingyan Promotion For Cherry World Fashion 03.28.2018
Thingyan Promotion For DAKS Fashion
DAKS Fashion ကိုဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များရှင့်
သင်္ကြန်အထူး Promotion ကို (15.3.2018) မှ (11.4.2018) အထိ Discount များချပေးနေပါပြီ။ DAKS အင်္ကျီများအားလုံးကို 1ထည်ဝယ် 10%၊ 2ထည် နှင့် အထက်ဝယ်ယူပါက 15%၊ G2000 အကျီၤ 20% မှ 70% အထိ Uniqlo အကျီၤ 20%၊ DAKS Wallet များကို 30%၊ Rosemary Shoes ဖိနပ် 20% မှ 50% အထိ လေ ျှာ့ချပေးလ ျက်ရှိနေပါသည်။ ဝယ်ယူအားပေးမှုကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
graceit_adminThingyan Promotion For DAKS Fashion 03.28.2018
Cherry World မွ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော နိုင်ငံခြားဇာအမျိုးမျိုး၊ ပိုးစစ်ချိတ်အမျိုးမျိုး၊ ကွန်ပျူတာစက်ပန်းထိုးအမျိုးမျိုး၊ DAKS Fashion နှင့် Rosemary တံဆိပ်ပါ ဖိနပ်အမျိုးမျိုးတို့အား ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။
Thingyan Promotion For Cherry World Fashion March 28, 2018
Thingyan Promotion For DAKS Fashion March 28, 2018
Cherry World Fashion
Address: 73rd Street, Bet: 31st x 32nd Street, Mandalay.
© Cherry World Luxury Collection 2018.
Web Developed By Grace IT Software Service Center.